Daily Horoscope Archives - Lifestyle Myanmar
စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ တစ်ဖက်သားကိုကြွေဆင်းသွားစေနိုင်တဲ့ ရာသီခွင် (၄) ခု
ရာသီခွင်တွေထဲမှာမှ စိုးရိမ်လွယ်တတ်လွန်းတဲ့ ရာသီခွင် (၄) ခု
တချို့လူတွေက အလိုလိုနေရင်းနဲ့ကို ဟိုဟိုဒီဒီတွေးတောပြီး စိုးရိမ်မှု Level များတတ်ပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခုခုဆိုရင် ကြောက်အားလန့်အားကြီးပြီးတော့ ထိတ်လန့်လွယ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်း များလွန်းကြပါတယ်။ လူအမျိုးအစားတွေထဲကမှ ဒီရာသီခွင်လေးခုကတော့ ရာသီခွင်တွေထဲမှာမှ စိုးရိမ်လွယ်တတ်လွန်းတဲ့ ရာသီခွင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းအရင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်စိတ်များလွန်းတာက ကောင်းတာလည်းရှိပေမယ့် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် ရေရှည်မှာ မကောင်းပါဘူး။ သင်က စိုးရိမ်စိတ်များလွန်းရင် ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကို ကြိုးစားလျှော့ပေးပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။ ၁။ Aries (March 21 –...
တစ်ချို့သော ဆက်ဆံရေးတွေက အစကတည်းက ဖြစ်မလာသင့်တဲ့ လုံးဝမရည်ရွယ်သင့်သော ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရာသီခွင် နိမိတ်တွေက သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတာကြောင့် သင်ဘယ်တော့မှ မချိန်းတွေ့သင့်ဘူးဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ ရာသီခွင်တစ်ခုအမြဲရှိနေပါတယ်။ သင်နဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ရာသီခွင်က ဘယ်ရာသီခွင်များဖြစ်မလဲ? ၁။ Aries (March 21 – April 19) Aries, သင့်ရဲ့ စိတ်ရှည်မှုနှင့်...
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထူးခြားစွာ ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ၎င်းတို့ကို ပုံဖော်နိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးစီတိုင်းက စိတ်ခံစားချက်တွေကို မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြင့် ပြသကြပြီး အချို့က အမျက်ဒေါသထွက်တဲ့နေရာမှာ အထီးကျန်နေရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေက ရာသီခွင်လက္ခဏာတွေဖြင့် လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ ဝမ်းနည်းမှုက ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သိမ်မွေ့သော...
နားလည်ရခက်တဲ့ Gemini တွေကို ချစ်မိတဲ့တွေအတွက် သိသင့်တဲ့ အမှန်တရား ၅ ခု
သင်ချိန်းတွေ့နေတဲ့ သူက တစ်ယောက်ထဲနဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို တစ်ပြိုင်တည်း ချစ်နေရသလို ခံစားဖူးလား။ တစ်ခါတစ်ရံ သူကိုချစ်ဖို့ ခက်ခဲနေပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ ကျတော့လဲ အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းနေပြန်တယ်လို့ သင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က အချစ်တတ်ဆုံး လူတွေဖြစ်ပြီး သင့်ကို သူချစ်ပေး နိုင်သလောက်တော့ ချစ်ပေးနေတဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေထုန် ရာသီဖွားတွေက ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုတည်းမှာပဲ ကွဲပြားတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး...
နတ်ဖက်တဲ့ဖူးစာ (သို့) အလိုက်ဖက်ဆုံးရာသီခွင် စုံတွဲ (၈)ယောက်
ရာသီခွင်စုံတွဲတွေမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လိုက်ဖက်မှုတွေ ပြည့်စုံနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ချိန်းတွေ့နေသည်ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် အချစ်ကို ရှာနေသည်ဖြစ်စေ သင့်ရာသီခွင်လက္ခဏာက သင့်အားမှန်ကန်သောလူကို ရှာဖွေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ရာသီခွင်တစ်ခုစီဟာ မြေ၊ လေ၊ ရေ၊ မီးဆိုတဲ့ အထူးဒြပ်စင်တစ်ခုခုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ တူညီတာတွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် သင်ဟာ တူညီတဲ့ ဒြပ်စင်ရှိသူတွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက အကောင်းဆုံးစုံတွဲတွေလဲဆိုတာ သိချင်ရင်...
ရာသီခွင်တွေရဲ့ ဒြပ်စင်များနှင့် ဘယ်ရာသီခွင်တွေထဲက ဘယ်လိုဒြပ်စင်မှာ ပါဝင်သလဲ
ကမ္ဘာကြီးကို ဒြပ်စင်တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ခြင်းက လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ရှိနေခဲ့သော အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒြပ်စင်တွေက ဘဝရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ကိုယ်စားပြုထားပါတယ်။ အနောက်တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒင်တွေမှာ မီး၊ ရေ၊ လေနှင့် မြေ ဆိုတဲ့ ဒြပ်စင်လေးမျိုးရှိပြီး ရာသီခွင် (၁၂) စလုံးက ဒီဒြပ်စင်တွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ Feng Shui နှင့် တရုတ်နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာမှာတော့ သစ်သား၊ မီး၊ မြေ၊ သတ္တုနှင့်...
Virgo (ကန်ရာသီဖွား) တွေကို ချစ်သူအဖြစ်ရထားရင် သိသင့်တဲ့ အချက် ၅ ခု
ဩဂုတ်လ (၂၃) ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့အတွင်း မွေးဖွားသူတို့ကို ကန်ရာသီဖွား (Virgo) များဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကန်ရာသီဖွားတွေက အချစ်ရေးမှာ အလေးအနက် ထားတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကန်ရာသီဖွားတွေကို ချစ်သူအဖြစ် ရထားပြီဆိုရင်တော့ ကံကောင်းတဲ့သူလို့ပဲ မှတ်ယူလိုက်ပါတော့။ ကန်ရာသီဖွားတွေက အချစ်တတ်ဆုံးနဲ့ အလေးနက်ထားတတ်ဆုံး ရာသီခွင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အမြဲဦးစားပေးတတ်တယ် သူတို့က...
ဂဏန်းဗေဒင်နှင့် သင့်အချစ်စစ်ကို ရှာကြည့်ရအောင်
ကိုယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါသလား? တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဘာ့ကြောင့်အရမ်းစွဲလမ်းနေလဲဆိုတာ သင်တွေးဖူးပါသလား? ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေက သင့်ဘဝလမ်းကြောင်းနံပါတ်မှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဂဏန်းဗေဒင်ရဲ့ရှု့ထောင့်အရ သင့်ဘဝလမ်းကြောင်းနံပါတ်က သင့် birth date ရဲ့ပေါင်းလဒ်ဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လိုက်ဖက်မှုကို နားလည်နိုင်စေမယ့် အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဂဏန်းဗေဒင်နဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းနံပါတ် လိုက်ဖက်ညီမှု အကူအညီဖြင့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ သင့်အနီးနားရှိသူတွေအကြောင်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘဝလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်မလဲ?...
Cancer ( ကရကဋ် ) ရာသီခွင်တွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အချစ်ရေး
ကရကဋ်ရာသီခွင်တွေက ဇွန်လ ၂၁ ရက်မှ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကရကဋ်ရာသီခွင်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ကဏန်းကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဂဏန်း ရေအမှတ်အသားက နက်ရှိုင်းတဲ့ ပင်ကိုယ်သဘောရှိပြီး စာနာနားလည်တတ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ပါတယ်။ သူတို့က ပျော့ပျောင်းပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်သော ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ကရကဋ်ရာသီခွင်တွေက ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ သစ္စာရှိပြီး အားကိုးအားထားပြုတတ်သော်လည်း စိတ်အပြောင်းအရွှေ့များဖြတ်သန်းရန်၊...
သင့်ရဲ့မွေးလပေါ် အခြေခံပြီး သင်က ဘယ်လိုအမျိုးသမီးမျိုးဖြစ်မလဲ?
မိန်းမတစ်ယောက်ကို နားလည်ဖို့က မလွယ်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ် ၊ ဒါဆိုသင်က ဘယ်လိုမိန်းမမျိုးလဲ? ကောင်းပါပြီ၊ သင့်ရဲ့မွေးလက သင်တကယ်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို အတိအကျပြောပြနိုင်တဲ့အတွက် ဒီအဖြေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်၊ မွေးလကို အသုံးပြုပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ astrology မှာကျင့်သုံးတဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ သူတို့ရဲ့ဘဝကို ချဉ်းကပ်ပုံနဲ့ ရာသီအလိုက် ဆက်ဆံရေးတွေကို Focus...